Bhaisajyaguru - uBuddha weMithi
Bhaisajyaguru: uBuddha weMithi
Bhaiṣajyaguru yiBuddha yeMithi okanye iKumkani yeMithi. Uhlonishwa kwiindawo ezininzi ze- Mahayana Buddhism ngenxa yamandla akhe okuphilisa, okwenyama nangokomoya. Kuthiwa ulawula phezu komhlaba ococekileyo othiwa iVaiduryanirbhasa.
Imvelaphi yeBuddha yamayeza
Ukukhankanywa kokuqala kweBhaiṣajyaguru kufumaneka kumbhalo weMahayana obizwa ngeBhaiṣajyaguruvaiḍuryaprabharaja Sutra, okanye ngokuqhelekileyo i-Medicine Buddha Sutra.
Imibhalo yesandla yesiSanskrit ye-sutra ethandana ngaphaya kwekhulu le-7 ifunyenwe eBamiyan, Afghanistan naseGiligit, ePakistan, zombini ezo zaziyingxenye yobukumkani bamaBuddhist yaseGandhara .
Ngokweli sutra, elidlulileyo kwixesha elizayo i-Medicine Buddha, ngelixa lilandela indlela ye-bodhisattva, isifungo sokwenza izinto ezilishumi elinambini xa eqonda ukukhanya .
Wathembisa ukuba umzimba wakhe uza kukhanya ngokukhanya okukhanyayo kwaye kukhanyise ihlabathi elingenakubalwa.
Umzimba wakhe oqaqambileyo, ococekileyo uya kubangela ukuba abo bahlala ebumnyameni babe ngukukhanya.
Wayeza kubonelela ngezinto eziphathekayo.
Uya kubakhokela abo bahamba ngeendlela eziphambukayo ukuze bafumane indlela yeVivili ezinkulu (Mahayana).
Wayeza kunceda izidalwa ezingenakubalwa ukugcina iMigqaliselo.
Wayeza kuphilisa iimbandezelo zomzimba ukuze zonke izilwanyana zibe namandla.
Uya kubangela ukuba abagulayo kunye nabantwana abangenasapho babe nokuphulukiswa kunye nosapho ukuba banakekele.
Uya kubangela abafazi abangenwavuyo kuba ngabafazi ukuba babe ngamadoda.
Uya kukhulula izinto ezivela kumnatha weedemon kunye nezibophelelo zamacandelo "angaphandle".
Uya kubangela ukuba abo baboshelwa kwaye basongelwe ukubulawa ukuba bakhululwe ekukhathazeni nasekuhluphekeni.
Uya kubangela abo banqwenela ukutya nokusela ukuze bahluthe,
Uya kubangela abo bahlwempuzekileyo, bengenazo iimpahla, bexhatshazwa ngubanda, ukufudumala kunye nezinambuzane ezinamaqabunga ukuba zibe neengubo ezintle kunye neendawo ezonwabisayo.
Ngokutsho kwe-sutra, uBuddha wachaza ukuba iBhaiṣajyaguru yayiya kuba namandla amakhulu okuphilisa. Ukuzinikela kwiBhaiṣajyaguru egameni labo babonakaliswe ukugula kuye kwadume kakhulu kwiTibet, eChina naseJapan kangangeminyaka eyikhulu.
I-Buddha ye-Medicine idibene nexabiso elincinci lelitye elixabisekileyo. ILapis lilitye eliluhlaza kakhulu elincinci elisoloko liqulethe i-pyrite elinegolide, edala inkwenkwezi yeenkwenkwezi zokuqala eziphazamisayo esibhakabhakeni esibumnyama. Ichithwa kakhulu kwizinto ezikhoyo ngoku e-Afghanistan, kwaye kwi-Asia yasempumalanga yamandulo yayingavamile kwaye ixabiseke kakhulu.
Kuye kwacatshangelwa ukuba yonke inqabileyo yehlabathi igugu elinamandla. Empuma yeAsia kwakucingelwa ukuba kunamandla okuphilisa, ngokukodwa ukunciphisa ukuvuvukala okanye ukuphuma kwamanzi ngaphakathi. E- Vajrayana Buddhism, umbala obomvu obomvu we-lapis kucingelwa ukuba uhlambuluke kwaye uyomeleze abo bawujonga.
Kwi iconography yobuBuddha, i-lapis yombala ihlala ihlala ifakwe kumfanekiso weBhaisajyaguru. Ngamanye amaxesha iBazajyaguru ngokwakhe i-lapis, okanye ingaba ngumbala wegolide kodwa ijikelezwe yi-lapis.
Uphantse uphethe isitya se-lapis okanye isilwanyana, ngokuqhelekileyo ngakwesobunxele sakhe, esithatha isandla kwisandla sakhe. Kwiimifanekiso zaseTibetan, isityalo se-myrobalan sinokukhula sisitya. I-myrobalan ngumthi ophethe izityalo ezinjenge-plum ezicingelwa ukuba zinemithi yokwelapha.
Uninzi lwexesha uza kubona iBazajyaguru. Ukuhlala kwisihlalo sobukhosi se-lotus, ngesandla sakhe sokunene sifika phantsi, isundu. Lo mqondiso ubonisa ukuba ulungele ukuphendula imithandazo okanye ukunika iintsikelelo.
Kukho amaqela amaninzi kunye ne-dharanis enomsindo wokukhupha uBuddha weMithi. La maxesha amaninzi ahlabelelwa egameni lomntu ogulayo. Omnye kukuba:
Yibani i-bisa ye-Sisaha
Oku kungaguqulelwa, "Ukuhlaselwa kwiBuddha yeMithi, i-Master of Healing, ekhanyisa njenge-lapis lazuli, njengenkosi.
Ngaloo ndlela-ezayo, ofanelekileyo, Uvule ngokupheleleyo kwaye uvuselele ngokugqibeleleyo, isichotho ukuphilisa, ukuphilisa, umphilisa. Bayibenjalo."
Ngamanye amaxesha le ngoma iphelelwe ngu "Tadyatha Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya samudgate Svaha."
YobuKristu basics 101
AmaMonks aseBuddhist kunye neeNhloko eziThuliweyo
Ngexesha ukusuka kwi-Persistective yeBuddhist
Iimonki zehlathi kwiBuddhism
Imbali yeBuddhist yokuqala: IiNkulungwane eziPhozo zokuQala
Into Oyifunayo Uninzi KuBomi
Guru Arjun Dev (1563 - 1606)
Imfazwe yaseVietnam 101
Imbali yeeMidlalo yeOlimpiki ka-1948 eLondon
Iinkcukacha zeHolmium - Inombolo ye-Atomic Number 67
Indlela Yokunikela Ingxoxo Ephazamisayo
Indlela yokwenza i-Dry Ice Bubbles
IBhalon Pioneer uThadede Lowe
USara Palin e-Bikini Ngomgca weRifle Urban Legend
Amanqaku e-Actinium - Element 89 okanye Ac
Funda ngeeCells Prokaryotic
Iingqungquthela eziPhambili zokuKhusela xa ufuna ukulungisa iSigaba sakho seGalofu
Uzijonga njani Unyaka O-10 Ukususela Ngoku?
Indlela yokuphendula "Yintoni endikuxelela yona ngeKholeji yethu?"
Ngaba imbongi ebizwa ngeVillar okanye iVergil?
Izikolo zinamaqela amaninzi xa ukhetha umgaqo-nkqubo weefowuni
I-Electrochemical Cell Definition
I-Franchise ye-Ginger Snaps
Usuku lukaPatrick uPatrick Family / Kids Movies
UWilliam Shakespeare: Isihlandlo soBomi bakhe
Indlela yokuthandaza ngayo uYobhi Ukufuna iMimangaliso
Ukunciphisa i-Base nge-Acid
Uthelekiso lweZikolo ezizimeleyo kunye nezikarhulumente
Ukugxotha iiRwns Music